छोरी बचाउन कठोर कानुन:: Naya Nepal
छोरी बचाउन कठोर कानुन
विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा कानुनको महत्तवपूर्ण व्यवस्था पढाउन जरुरी छ
हामीले जनप्रतिनिधिबाट संसारकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गर्यौं‍। संविधानको मूल मर्म टेकेर देवानी र फौजदारी संहिता बनाई कार्यान्वयनमा ल्यायौं। केही कमजोरी छाड्ने हो भने देशको कानुन र संविधान संसारकै उत्कृष्टमध्येमा पर्छ। तर पनि हामीले सोचे-खोजेजस्तो समाज निर्माण गर्न सकेनौं। हामीले बनाएको कानुनले हाम्रै छोरीहरूलाई सुरक्षा दिन सकेन।
अचेल बिहान उठेर पत्रिका पढ्न डर लाग्छ मलाई। रेडियोमा समाचारको धुन बजेपछि कहाली लागेर आउँछ। अझ सामाजिक सञ्जालमा कतिबेला कुन बालिका बलात्कार भएको वीभत्स लास देख्नुपर्ने भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ। परिवारका सदस्यसँग बसेर समाचार हेर्नै नसकिने भइसक्यो। ससाना छोरी नातिनीलाई के भनेर सम्झाउने ? पछिल्लो समय बालिका बलात्कार र हत्याका घटना बढेको छ। बलात्कारका घटनाले उकालो गति समाएको छ। न सानी बच्ची सुरक्षित छ न त हजुरआमा नै। बलात्कारी र आपराधिक मानसिकता भएकाले रोगी र अशक्त महिलासमेत छाडेनन्।
कलिला बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्नु जघन्य अपराध हो। यस्तो कुकृत्य गर्नेलाई जति नै सजाय दिए पनि कमी हुन्छ। हरेक पुरुषको गल्तीको पछाडि महिला नै दोषी हुनुपर्ने। बलात्कार पुरुषले गर्ने, दुईचार वर्षपछि ऊ छुटेर पुरानै जिन्दगी बिताउन पाउने। तर बलात्कारपछिको कारुणिक जिन्दगी पनि महिलाले नै बाँच्नुपर्ने। पीडित महिला शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिकरूपमा प्रताडित भएरै बाँच्नुपर्ने परिस्थिति छ। महिलामाथि हुने अपराधजन्य घटना होस् या सबै किसिमका हिंसा सहनै नसकिने भइसक्यो। यसका लागि कडा कानुन जरुरी छ। कानुन यति धेरै कडा होस् कि सुनेरै अपराधीको हात कामोस्।
सबै प्रकारका बलात्कारी वा बालिका बलात्कारपछि हत्या गर्ने हत्यारा उनीहरूलाई समाजमा बाँच्ने अधिकार दिनु हुन्न। जघन्य अपराध गर्ने कारकतत्त्व नै नासियोस्। हामीले कानुन निर्माण गर्ने बेलामा अलि धेरै मानवअधिकारका सवालमा सोच्यौं। यसले गर्दा पनि हामी कलिला नानीको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न सकेनौं। कन्चनपुरकी निर्मला पन्त हुन् कि पोखराकी श्रेया वा देवदहकी अंगुरा पासी र बझाङकी सम्झना कामी उनीहरूलाई न्याय गर्न सकिरहेका छैनौं।
हामीले निर्माण गरेको सामाजिक मान्यता र गलत प्रथाले पुरुषलाई सदैव सुप्रिम बनाएर हुर्कायौं। पितृसत्ताले उनीहरूलाई माथिल्लो दर्जामा सम्मान दियो। उनीहरूलाई अगाडि बढाउन हामीले ठूलो त्याग ग¥यौं। तर यसको बदलामा महिलाको सम्मान गर्ने, दिदीबहिनीको संरक्षण गर्ने समाज बनाउन सकेनौं। धेरैजसो बलात्कारका घटना आफन्त तथा चिनेजानेकैबाट हुने गरेको तथ्यांक छ। प्रायः महिला हिंसा पनि आफन्तबाटै हुने गर्छ। यसले गर्दा पनि हामीले छोरा र छोरीलाई दिने नैतिक शिक्षा बढाउन जरुरी छ। घरबाटै विभेदविरुद्ध सिकाउन जरुरी छ।
बालिका बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि केही महिला सांसद मिलेर छलफल गरेका थियौं। अबोध बालिका बलात्कृत भएर मर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति कसरी अन्त्य गर्ने भनेर छलफल चलाएका थियौं। प्रायजसोले बालिका बलात्कार गर्नेविरुद्ध मृत्युदण्डको कानुन बनाउनपर्ने माग गर्नुभएको छ। सामाजिक न्यायको सवालमा विभिन्न पाटीका महिला सांसद मिलेर एकबद्ध आवाज उठाएका छौं।
हामीले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड त मागेका छौं। तर यो नै सही विकल्प हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालको संविधानमै नभएको विषय भएकाले सुन्दा सान्दर्भिक देखिँदैन। तर दीर्घकालीन रूपमा यसले अपराधको दर भने घटाउनेछ। मृत्युदण्डको व्यवस्था भएको देशमा बलात्कार र अपराधका घटना हुँदैन भन्ने होइन तर अपराधको संख्या घट्नेछ। टिट फर ट्याट नियम लागू भएका देशमा अपराधको दर कम छ। हामीले सहनै नसक्ने
अवस्थामा पुगिसक्यौं। कसरी हाम्रा नानीलाई जोगाउने ? नानीहरूका सपना कलिलैमै निमोठ्ने अपराधीलाई बाँच्ने छुट हुनुहुन्न। यस्ता अपराधी बाँचेर पनि कुनै उपलव्धि हुने छैन। उसबाट घरपरिवार पनि सुरक्षित हुन सक्दैन।
सजाय भोग्नपर्छ भन्ने थाहा पाएकाले पक्कै पनि यस्ता जघन्य अपराध गर्न हिम्मत गर्दैनन्। कतिपय मानिस त आपराधिक मानसिकताका पनि हुन्छन्। उनीहरूलाई कसरी ठेगानमा लगाउने ? उनीहरूको मानसिकता नै गलत छ भन्दैमा हाम्रा निर्देाष नानीहरूलाई असुरक्षित बनाइरहनु पनि त गलत हो।
नेपालले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन नमिल्ने अवस्था होला। नेपालको न्यायप्रणाली, अपराधको अनुसन्धान प्रक्रिया केही झन्झटिलो पनि छ। यी सबै व्यवस्थामा सुधार ल्याएर कानुन कडा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हुन त मृत्युदण्डको अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान, प्राक्टिस, यसको विकल्प, नेपालको कानुनले अपनाउन मिल्छ मिल्दैन ? यी विविध विषयमा व्यापक छलफलपछि मात्रै निष्कर्ष निस्कनेछ। यसको अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। मृत्युदण्डको सजायसम्बन्धी व्यापक अध्ययन छलफलपछि संविधान सशोधनको प्रस्ताव गरिनेछ। सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागितामा नयाँ कानुन बन्नेछ भन्ने आशा गरौं। अपराध ढाकछोप गर्न सघाउने समाजका पञ्च भलाद्मीलाई पनि हामी कानुनी कठघरामा ल्याउन जरुरी छ। कडा खालको कानुन भए न्यायालयले न्यायपूर्ण तरिकाले फैसला गर्ला भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
विभिन्न बहानामा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि देखिएको छ, जुन गलत हो। समाजका दलित, गरिब, निमुखा बालिका धेरैजसो हिंसामा परिरहेको देख्छौं। उनीहरूका लागि न्यायको ढोकासम्म पुग्न जटिल छ।
हामीले स्कुलस्तरको पाठ्यक्रम पढ्ने बेला कहींकतै पनि कानुनको जानकारी गराइएको हुन्न। नैतिक अनुशासन सिक्दै गर्दा केही कानुनका नियम जान्ने मौका पाउँछौं। तर यति थोरै ज्ञानले मात्रै कानुन बुझिँदैन। विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा कानुनको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पढाउन जरुरी छ। अति जरुरी देवानी तथा फौजदारी संहिताका केही बँुदा अध्ययन गराउन आवश्यक छ।
मृत्युदण्ड आफैंमा अपराध भएकाले पनि यसको सामाजिक प्रभाव सकारात्मक नहुन सक्छ। त्यसैले न्यायप्रणालीलाई स्वच्छ, चुस्त र विवादमुक्त बनाउन जरुरी छ। जघन्य अपराधबाट समाजलाई जोगाउन मृत्युदण्डको विकल्प हुनै सक्दैन।